Mahatsiaro ireo ezaka nataon’i Kofi Annan tao Timor Atsinanana noadinoina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, Français, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Português, English
Kofi Annan, sary avy amin'ny Orina Mpanasoa Kofi Annan, 2015, nahazoana alalana avy amin'ny Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).
Manatevin-daharana an'izao tontolo izao tamin'ny fisaonana ny fahafatesan'ilay diplaomaty iraisam-pirenena Kofi Annan izay namoy ny ainy tany Soisa teo amin'ny faha-80 taonany tamin'ny 18 Aogositra 2018 ny vahoakan'i Timor atsinanana (fantatra ihany koa amin'ny hoe Timor-Leste).
Namela lova fametrahana fandriampahalemana erantany i Annan nandritra ireo krizy iraisampirenena izay namaritra ny vanim-potoana aorian'ny ady mangatsiaka. Matetika adino ny ezaka nataony tamin'ny fametrahana fandriampahalemana tao Timor Atsinanana, saingy tao Dili, renivohitra kely amorontsiraka, narehitra ny labozia ho an'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana (ONU) teo aloha izay nifampiraharaha fandriampahalemana tao amin'ny firenena niharan'ny fibodoana feno herisetra avy amin'i Indonezia nandritra ny roapolo taona nanomboka tamin'ny taona 1975.
Timor Atsinanana dia ampahany amin'ny vondronosy Aziatika Atsimo Atsinanana (akaikin'i Aostralia) ahitana olona eo amin'ny iray tapitrisa izay nahazo fahaleovantena avy any Indonezia tamin'ny taona 1999 ary nanatevin-daharana ny ONU tamin'ny taona 2002.
Mpisera Facebook João Martins nandefa lahatsoratra momba ny fanomezam-boninahitra an-dabozia:
Timorey an-polony no nitondra labozia fiaretan-tory ho fahatsiarovana ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Kofi Annan izay nodimandry 2 andro lasa izay sy ny fandraisany anjara tamin'ny fizotry ny Fahaleovantenan'i Timor Atsinanana nandritra ny fotoana niasany tao amin'ny Firenena Mikambana. Misaotra an'Atoa Kofi Annan ary handry am-piadanana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra anie ny fanahiny.
Any ivelan'i Timor atsinanana, nameno ny fampahalalam-baovao sy ny media sosialy ny fanomezam-boninahitra azy. Na dia izany aza, nisy ny sasany nampahatsiahy ny dingana tsy vitan'i Annan tamin'ny raharaham-bahiny fony izy lehiben'ny fitandroam-pahalemana tao amin'ny Firenena Mikambana, tamin'ny ady ao Iraka sy ny habibiana tany Rwanda sy Bosnia.
Annan tamin'ny maha-mpanelanelanana fandriampahalemana azy tany Timor atsinanana
Tamin'ny taona 1975, nanafika an'i Timor atsinanana ny tafika Indoneziana ary nibodo ny faritra, nametraka an-katerena ny fiteny sy ny kolontsaina Indoneziana. Nanampim-bava ny mpanohitra rehetra izy ireo, nitarika habibiana toy ny vono olona tao Santa Cruz tamin'ny taona 1991 rehefa notifirina ho faty ireo Timorey Tatsinanana mpitolona ho amin'ny fahaleovantena miisa 250.
Nandritra ny fibodoana, nanasaraka ankizy teo amin'ny 4.000 tamin'ny fianakaviana mpanohitra ny tafika Indoneziana, nitondra ny ankizy ho fomba iray “handemena sy hampietrena” ny fahavalony.
Niangona tsy nisy na inona na inona ny fifanakalozan-kevitra momba ny fandriampahalemana 15 taona mandra-pandraisan'i Anna ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 1997 sy nanomezany toky fa hamaha ny krizy any Timor Atsinanana izy. Tamin'ny Aogositra 1999, niresaka isan'andro i Annan sy ny filoha Indoneziana B.J. Habibie, araka ny voalazan'ny bokin'ilay mpahay tantara, Geoffrey Robinsono: If You Leave Us Here, We Will Die: How Genocide Was Stopped in East Timor (raha mandao anay eto ianao,dia ho faty izahay, ahoana no nanatsaharana ny vono olona tao timor atsinanana).
Ny 4 Septambra 1999 i Annan niresaka alina tamin'i Habibie, izay nanangana ady tamin'i Annan tany amin'ny lafiny ilan'izao tontolo izao.
Ny herinandro teo aloha, nifampiraharaha fitsapan-kevi-bahoaka ho amin'ny fahaleovantena izay nanohina sy nahatezitra ny tafika Indoneziana i Annan sy i Habibie. 24 taona taorian'ny fibodoana feno herisetra, efa ho ny 80 isan-jaton'ny mpifidy tany Timor Atsinanana no nifidy ny fahaleovantena tanteraka amin'i Indonezia.
Fantatr'i Annan fa tsy afaka miasa amin'ny iraka fametrahana fandriampahalemana tsy misy ny fankatoavan'i Habibie izy ka nifandray tamin'ireo mpitondra eo amin'izao fotoana izao mba hanerena an'i Indonezia. Nahazo fanohanana ho amin'ny fidirana an-tsehatra niaraka tamin'i Aostralia izy tamin'ny 12 Septambra 1999.
Nanaiky ny valin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ihany i Habibie ary nampanantena fandriampahalemana sy fiarovana, saingy tsy nahafehy ny miaramila intsony ny governemantany, ka notaterina fa niely nanerana an'i Timor Atsinanana ny vonomoka.
Olona 300.000 no nandositra nankany Timor Andrefana, saingy olona an'arivony no maty tamin'ny fanafihana nanerana ny firenena, anisan'izany ny fahafatesan'olona 200 tao anatin'ny iray andro tao anatin'ny Fiangonana Suai any amin'ny faritra atsimo andrefana.
Nanome toky ny fidiran'ny Firenena Mikambana an-tsehatra miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny tafika Aostraliana izay namerina ny fitoniana tao amin'ny nosy i Annan. Na dia taorian'ny fametrahana ny fitoniana aza, dia nisisika hatrany tamin'ny hery mpampandry tany tao amin'ny firenena nandritra ny telo taona i Annan, nanemotra ny fahaleovantenan'i Timor Atsinanana ho hatramin'ny 10 mey 2002.
Nilaza i Robinson, mpahay tantara, fa manan-danja amin'ny fiantohana ny fiarovana sy ny fitonian'ny nosy ny firotsahan'i Annan an-tsehatra teo amin'ny sehatra maha-olombelona tao Timor Atsinanana.
Mandinika ny politikan'ny fidirana an-tsehatra
Nandritra ny asan'i Annan tamin'izy filohan'ny fampandriantany tao amin'ny Firenena Mikambana, nilaza izy fa nitaky fandinihana matotra ny politikan'ny fidirana an-tsehatra ny fisian'ny ady tao anatin'ny fotoana mitovy tao Timor Atsinanana sy tany Kosovo (1998). Ao amin'ny fanehoan-keviny Interventions: A Life in War and Peace, nanoratra izy hoe:
… niatrika krizy roa samy hafa – Kosovo sy Timor Atsinanana izao tontolo izao- izay nahatonga adihevitra eran-tany momba ny fitsabahana sy ny fiandrianam-pirenena, ny zon'ny vahoaka ary ny andraikitry ny fanjakana. Nampifandraisiko tamin'ireo krizy roa tonta ireo ny fanoloran-tenako goavana manokana ara-diplaomatika – ka ny Firenena Mikambana mitàna toerana lehibe amin'ny raharaha Timor Atsinanana – sy ny fahavononana hanavao ny resaka momba ny fidirana an-tsehatra, ary hamerina ny Firenena Mikambana amin'ny toerana afovoany amin'ny fametrahana sisintany izay azon'ny fanjakana atao ao anatin'ny sisintaniny.
Marianne Jago, mpiasan'ny fanampiana sady manam-pahaizana akademika momba an'i Timor atsinanana, nilaza ny andraikitr'i Annan ho tena zava-dehibe sy vao sambany tamin'izany fotoana izany:
Tapa-kevitra ny handray andraikitra mavitrika amin'ny resaka Timor Atsinanana i Annan. Nanambara ampahibemaso ny teo alohany, Javier Pérez de Cuéllar fa nahita ny andraikiny tamin'ny resaka Timor atsinanana ho toy ny ‘mandeha anelanelany’ fa tsy avy amin'ny fitarihana sy ny fanavaozana izy.
Mifanohitra amin'izany, fotoana fohy taorian'ny nandraisany birao, nifandray tamin'ireo governemantan'i Portiogaly sy Indonezia i Annan, ary nampahafantatra azy ireo ny faniriany hampiasa tsara ny biraony mba hanampy amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny resakaTimor atsinanana.
Manoritra ny fomba fiitarihana sahisahy nataon'i Annan tao Timor Atsinanana ho toy ny mahomby indrindra tamin'ny asany izy:
Mifanohitra amin'ny fisalasalana nanenenan'i Annan mafy manokana nandritra ny vono olona tao Rwanda sy Srebrenica, fony izy filohan'ny Departemanta misahana ny hetsika fampandriantany tao amin'ny Firenena Mikambana (DPKO), ary avy eo sekretera jeneraly, nanambara tamin'ny “sekretarian'ny Firenena Mikambana” izy mba ‘hanaraka fa tsy hitarika ny Filan-kevi-piarovana”, tao anatin'ny ezaka mafy ara-diplaomatika iraisampirenena ny biraon'ny Sekretera Jeneraly mba hanery an'i Habibie hanaiky ny hery iraisampirenena ho ao Timor Atsinanana.
Nidera an'i Annan noho ny asany tany Timor.Atsinanana i José Ramos-Horta, filohan'i Timor Atsinanana teo aloha sady anisan'ny niara-nahazo ny loka Nobel momba ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 1996.
Naneho ny tsy fahafam-pony tamin'ireo ady tsy voavaha ny Tambajotran'Hetsika Timor Atsinanana sy Indonezia [The East Timor & Indonesia Action Network], fikambanana manohy amin'ny fanandrata-teny ho amin'ny fampihavanana avy amin'ny herisetra sy fibodoana naharitra ampolony taona:
Namoy ny ainy androany ny sekretera jeneralin'ny ONU teo aloha. Nitanisa ny ezaka nataony ho an'i Timor tamin'ny taona 1999 ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana. Na izany aza, mbola tsy tanteraka ny fampanantenany tamin'ny anaran'ny Firenena Mikambana ho amin'ny rariny sy ny andraikitra manoloana ny heloka bevava tamin'ny olombelona nataon'i Indonezia sy ny hafa